Land for Sale in Yangon Region - Myanmar | iMyanmarHouse.com
Lands for Sale in Yangon Region
သုဝဏ္ဏ ဗိုလ်ချုပ်ရွာ ဈေးတန် ရှားပါးမြေကွက် ရောင်းမည်။
🏡 သင်္ဃန်းကျွန်း သုဝဏ္ဏဗိုလ်ချုပ်ရွာ #ဈေးတန်ရှာ...
Ad Number S-10043108
** အရှေ့ဒဂုံအနော်ရထာလမ်းမကြီး​ မြေ(40x60)အုတ်တဲတိုင်းဂရံ အရောင်းလေး
Ad Number S-10042785
မေခအိမ်ရာ ဈေးတန် မြေသီးသန့် အမြန်ရောင်းမည်
5,400 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10042315
Shwe Land Real Estate Close
မလိခအိမ်ရာ ရတနာလမ်းမကျောကပ် နေရာကောင်း မြေသီးသန့် အမြန်ရောင်းမည်
🏡 သင်္ဃန်းကျွန်း #မလိခအိမ်ရာ_ရတနာလမ်းမကျောကပ်နေ...
Ad Number S-10042259
✅📣📣✅မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရာဇသကြ ်န်းလမ်းနီး ၊၅၀ရပ်ကွက် ၅၀ကေွ့ထောင့်ကွက် လုံးချင်းအိမ် ...
Ad Number S-10041289
သု၀ဏၰ ၊ (29)ရပ္​ကြက္​၊ ျမ၀တ္​ရည္​လမ္​းမ​ေပၚ 30'x60'၊ ​ေျမ၊ ​ေရ၊မီး၊ ဂရန္​​ေျမ။
သု၀ဏၰ ၊ (29)ရပ္​ကြက္​ ၊ ျမ၀တ္​ရည္​လမ္​းတြင္​ 30'x60'၊ ​...
3,450 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10039708
🏞 မရမ်းကုန်း (9)မိုင် ပြည်လမ်းဒဲ့ပေါက် နေရာကောင်း ခြံက...
Ad Number S-10038943
☃️☃️ #သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် နေရာကောင်း မြေကွက်ကျယ် ရောင်းရန်ရှိပါသည်။ ☃️☃️
Ad Number S-10045138
Ad Number S-10044981
ဈေးတန်တန်လေးနှင့်ရောင်းပေးပါမည် 🔹(32ရပ်ကွက်)မှာဆရာစံ‌လမ်းမကြီးနီး ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးလ...
Ad Number S-10044874
Eain Thaw Tar Real Estate & Law Firm Services Close
Ad Number S-10044721
(43'x60')အကျယ်၊ မြောက်ဒဂုံ၊ (၂၈)ရပ်ကွက်၊ အောင်ရိပ်သာလမ်းသွယ်၊ မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိ
Ad Number S-10043950
ဝေဇယန္တာဥယျာဉ်အိမ်ယာမှ မြေသီးသန့်အကွက်ကျယ်တစ်ကွက်ရောင်းရန် ရှိပါတယ်။
Ad Number S-10043555
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရေစက်လမ်းမှာရှိတဲ့ ထောင့်ကွက်ခြံကျယ်အရောင်းလေးရှိပါတယ်။
Ad Number S-10043451
Ad Number S-10043386
Yangon Region in the heart of Lower Myanmar is the administrative capital of Myanmar and host to the country’s largest city, Yangon which is its capital. As such, it isafocal point of interest for real estate, particularly for investors looking to buy land in Myanmar asabusiness venture. The mixed landscape of colonial architecture and cultural heritage makes it ideal for new attractions or even businesses such as boutique hotels. The current land prices in prime downtown areas are of high value and areas like Yangon are prime centres of commercial urbanisation. Land prices in Yangon typically vary by way of location as is the norm in real estate. Areas beyond the lines of the city centres are vast and much more accessible toawider range of investors. Due to Myanmar’s rich, fertile soil, agricultural development has the potential to beavery lucrative business opportunity for investors although suburban developments also project long-term viability in these areas.